XCP-NG yakasununguka imwe nzira kuCitrix XenServer | Linux Vakapindwa muropa
Kune avo vanoteera chikamu chekuona, iwe zvechokwadi wakanzwa nezveCitrix XenServer. Mukuita, XenServer iri imwe yeanonyanya kufarirwa hypervisors mupasi. Izvo zvinotarisirwa kune zvebhizinesi uye dhata nzvimbo mhinduro.
XenServer zviri pamutemo yakavhurika sosi chigadzirwa, zvisinei, inogona kutengeswa mu "editions edhisheni" kune chero munhu anoda rutsigiro. Kune rimwe divi, zvinogona kubatsira kuteedzera kuisirwa mhinduro yakakwana.
Kunyangwe iri yakavhurwa sosi chigadzirwa, Muna 2017 Citrix yakaisa zvimwe zvinorambidzwa pakushandiswa kwechigadzirwa.
Kunyanya maererano nenhamba yemuchina unotsigirwa neyemahara vhezheni uye zvakare yakabvisa zvimwe zvinhu zvinongowanikwa mushanduro dzakabhadharwa (semuenzaniso simba rekushandisa ndangariro, chaiyo-nguva data kufambisa, nezvimwewo).
1 Nezve XCP-NG
Tatarisana nedambudziko iri, XCP-NG yakamuka, iri kuvandudza yemahara kutsiva yeiyo chaiyo XenServer chikuva chekutumira nekutarisira gore zvigadzirwa.
XCP-ng inozivikanwa seyakavhurika sosi chikuva uye inopa seti yezvinhu zvakatorwa kubva mahara vhezheni yeakakurumbira XenServer hypervisor.
SaXenServer, iyo XCP-NG chirongwa Kurumidza shandisa server uye workstation virtualization, ichipa nzira dzekutarisira pakati nepakati nhamba isingaverengeki yemaseva uye chaiwo michina.
XCP-NG inodzoreredza mashandiro ayo Citrix yaakabvisa pane yemahara vhezheni yeCitrix Xen Server, kutanga neshanduro 7.3 uye ndiwo mhedzisiro yekudyidzana pakati penharaunda yevashandisi nemakambani kugadzira isina muganho uye isina kudzivirirwa virtualization chikuva.
Sezvakakosha maficha, XCP-ng inopa:
Yemazuva ano interface - Xen Orchestra-yakavakirwa kune chaiyo michina manejimendi
Rarama kutama: kugona kufambisa chaiwo michina pasina kukanganiswa
Kukwanisika: kukura pasina chero kurambidzwa
Chengetedzo: chengetedza kuchengetedzwa kwemuchina chaiwo
iko kugona kusanganisa akawanda maseva muboka
nzira dzekuona kuwanikwa kwepamusoro
vagovana zviwanikwa zvakagovaniswa uchishandisa XenMotion tekinoroji
Kunze kweizvi zvese inotsigira mhenyu kutama kwemuchina michina pakati pemasumbu emasumbu uye pakati pemasumbu akasiyana / mauto (izvo zvisina kugovana chengetedzo), pamwe nekurarama kutama kweVM disks pakati penzvimbo dzekuchengetera.
Iyo puratifomu inogona kushanda nenhamba yakakura yedhata yekuchengetedza masisitimu uye inosiyaniswa nekuvapo kweyakareruka uye yakajeka interface yekuisa uye manejimendi.
Iye zvino XCP-NG iri mune yayo vhezheni 8.0, iyo yakamisikidzwa seyakagadzikana vhezheni, yakakodzera kushandiswa kwese. Inotsigira kusimudzira kubva kuXenServer kuenda kuXCP-ng, inovimbisa kuwirirana kuzere neXen Orchestra, uye zvinokwanisika kufambisa chaiwo michina kubva kuXenServer kuenda kuXCP-ng uye zvinopesana.
Pakati pehukuru hunhu hweiyi vhezheni tinogona kusimbisa zvinotevera:
Kuwedzera mapakeji kune chikuru repository kushandisa iyo ZFS faira sisitimu yekuchengetedza zvinyorwa. Kuitwa kwacho kwakanangana nekuburitswa kweZFS paLinux 0.8.1. Kuisa, ingomhanya «yum kuisa zfs".
Ext4 uye xfs rutsigiro rweSecurity Repository (SR) ichiri kuyedza (inoda kuiswa "yum kuisa sm-Kuwedzera-madhiraivha«), Kunyangwe pasina mitsara isati yatumirwa kumatambudziko akasangana nawo.
Kuteedzerwa kwekutsigirwa kwekutakura masisitimu evaeni muEFI mode
Wakawedzera modhiyo yekukurumidza kuendeswa kweXen Orchestra yakananga kubva pazasi peji reiyo inomiririra nharaunda interface.
Iyo yekumisikidza mifananidzo inogadzirisirwa pasi peiyo CentOS 7.5 package. Linux kernel 4.19 uye Xen 4.11 hypervisor vanobatanidzwa.
Emu-maneja akanyorwazve kunyora muC mutauro.
Iwe unogona ikozvino kugadzira magirazi e yum, ayo anosarudzwa zvichienderana nenzvimbo. Mukumisikidzwa kwenzvimbo, kuongororwa kweRPM kurodha pasi mapakeji uchishandisa masiginecha edigital inoitwa.
Nokusingaperi, kuiswa kweye cryptsetup, htop, iftop, uye yum-utils mapakeji anopiwa mu dom0.
Kuwedzera kuchengetedzwa kubva MDS (Microarchitectural Data Sampling) kurwisa kune maIntel processor.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kushanyira iyo yepamutemo webhusaiti. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » XCP-NG yakasununguka imwe nzira kuCitrix XenServer
Freddy Angle akadaro
Pindura Fredy Angulo